API6D Vagadziri - China API6D Vatengesi & Fekitori
Krisimasi Muti uye Wellheads
Simbi mbiri-Piece inoyerera Bhora Valve
BHARA SCREW OPERATOR Gedhi Valve
DUAL Plate TARIRA VHIVHA
Kunze kweSleeve Cage Chock Valve
Kuwedzera Kupfuura kuburikidza neKodhijeti Gedhi Valve Ye API6A Standard
Hydraulic Akavhiyiwa Gate Valve
Screw Type Mud Valve YeAPI6A Standard
Chinyorwa Gedhi Valve YeAPA6A Standard
Kuchera Matope Akawanda
Pamusoro Bvunzo Manifold
Chinangwa cheECPAI ndechekuti vese vashandi vatarise mhando, kuve nechokwadi zvigadzirwa zvakagadzirwa neECPAI pasina hurema, edza nepatinogona napo kusangana nezvinodiwa
Kunze kweSleeve Cage Chock ...
Metal maviri-Piece zvinoyangarara Ba ...
Zvidimbu zviviri zvakakandwa zvakagadziriswa bhora vharuvhu
Piri Piece Cast Trunnion Bhora Valve inogadzirwa neECPAI inonyanya kushandiswa kuvhara kana kubatanidza svikiro mupombi. Sarudza maviri Piece Cast Trunnion Bhora Valve yezvakasiyana zvigadzirwa inogona kushandiswa kumvura, steam, mafuta, gasi rakanyungudutswa, gasi rechisikigo, gasi, nitric acid, carbamide uye imwe svikiro.
Zvidimbu zviviri zvakagadzirwa zvakagadziriswa bhora vharuvhu
Zvidimbu zviviri zvakagadzirwa Trunnion Bhora Valve inogadzirwa neECPAI inonyanya kushandiswa kuvhara kana kubatanidza svikiro mupombi. Sarudza Mbiri Yekugadzira Trunnion Bhora Valve yezvinhu zvakasiyana inogona kushandiswa kumvura, chiutsi, mafuta, gasi rakanyungudutswa, gasi rechisikigo, gasi, nitric acid, carbamide uye imwe svikiro.
Nhatu chidimbu chakakandirwa chakasungirwa bhora vharafu
Nhatu Piece Cast Trunnion Bhora Valve inogadzirwa neECPAI inonyanya kushandiswa kuvhara kana kubatanidza svikiro mupombi. Sarudza Matatu Piece Kukanda Trunnion Bhora Valve yezvinhu zvakasiyana zvinogona kushandiswa kumvura, steam, mafuta, gasi rakanyungudutswa, gasi rechisikigo, gasi, nitric acid, carbamide uye imwe svikiro.
Nhatu chidimbu ndokugadzira yakamisirwa bhora vharafu
Nhatu Piece Ndokugadzira Trunnion Bhora Valve inogadzirwa neECPAI inonyanya kushandiswa kuvhara kana kubatanidza svikiro mupombi. Sarudza Tatu Piece Ndokugadzira Trunnion Bhora Valve yezvakasiyana zvigadzirwa inogona kushandiswa pamvura, chiutsi, mafuta, chakanyungudutswa gasi, gasi, gasi, nitric acid, carbamide uye imwe svikiro.
Kanda simbi swing cheki vharafu
Kanda Swing Tarisa Valve inogadzirwa neECPAI inonyanya kushandiswa kuvhara kana kubatanidza svikiro mupombi. Sarudza Cast Swing Tarisa Valve yezvinhu zvakasiyana zvinogona kushandiswa kumvura, steam, mafuta, gasi rakanyungudutswa, gasi rechisikigo, gasi, nitric acid, carbamide uye imwe svikiro.
Ndokugadzira simbi simudza cheki vharafu
Yakagadzirwa Piston Tarisa Valve inogadzirwa neECPAI inonyanya kushandiswa kuvhara kana kubatanidza svikiro mupombi. Sarudza Yakagadzirwa Piston Tarisa Valve yezvinhu zvakasiyana inogona kushandiswa kumvura, huni, mafuta, gasi rakanyungudutswa, gasi rechisikigo, gasi, nitric acid, carbamide uye imwe svikiro.
Kaviri disc disc vharuvhu
Dual Check Valve inogadzirwa neECPAI inonyanya kushandiswa kuvhara kana kubatanidza svikiro mupombi. Sarudza Dual Check Valve yezvinhu zvakasiyana inogona kushandiswa kumvura, steam, mafuta, gasi rakagadziriswa, gasi rechisikigo, gasi, nitric acid, carbamide uye imwe svikiro.
Kanda simbi gedhi vharafu
Cast Gate Valve neECPAI inonyanya kushandiswa kuvhara kana kubatanidza svikiro mupombi. Sarudza Cast Gedhi Valve yezvinhu zvakasiyana inogona kushandiswa kumvura, steam, mafuta, gasi rakanyungudutswa, gasi rechisikigo, gasi, nitric acid, carbamide uye imwe svikiro.
Ndokugadzira simbi gedhi vharafu
Yakagadzirwa Gate Valve inogadzirwa neECPAI inonyanya kushandiswa kuvhara kana kubatanidza svikiro mupombi. Sarudza Yakagadzirwa Gate Valve yezvinhu zvakasiyana inogona kushandiswa kumvura, steam, mafuta, gasi rakanyungudutswa, gasi rechisikigo, gasi, nitric acid, carbamide uye imwe svikiro.
Kandira simbi globe vharafu
Cast Globe Valve inogadzirwa neECPAI inonyanya kushandiswa kuvhara kana kubatanidza svikiro mupombi. Sarudza Cast Globe Valve yezvinhu zvakasiyana inogona kushandiswa kumvura, steam, mafuta, gasi rakagadziriswa, gasi rechisikigo, gasi, nitric acid, carbamide uye imwe svikiro.
Ndokugadzira simbi globe vharafu
Fordge Globe Valve inogadzirwa neECPAI inonyanya kushandiswa kuvhara kana kubatanidza svikiro mupombi. Sarudza Fordge Globe Valve yezvinhu zvakasiyana inogona kushandiswa kumvura, steam, mafuta, gasi rakanyungudutswa, gasi rechisikigo, gasi, nitric acid, carbamide uye imwe svikiro.
FC gedhi vharafu, inoratidzirwa neakakwira kuita uye bi-yekunongedzera kuiswa, yakagadzirirwa uye kugadzirwa zvinoenderana neepamberi tekinoroji yenyika. Iyo ishamwari yeFC magedhi mavharuvhu ayo anopa kuita kwakaringana kuita pasi pekumanikidza kwebasa. Iyo inoshanda kune oiri uye gasi musoro wepamusoro, muti weKisimusi uye kudzipwa uye kuuraya manifold yakatarwa 5,000Psi kusvika 20,000Psi. Hapana maturusi akakosha anodikanwa kana zvasvika pakutsiva gedhi revhavha uye chigaro.